PesetaCoin စျေး - အွန်လိုင်း PTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PesetaCoin (PTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PesetaCoin (PTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PesetaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $103 819.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PesetaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PesetaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PesetaCoinPTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0101PesetaCoinPTC သို့ ယူရိုEUR€0.00853PesetaCoinPTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00771PesetaCoinPTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00922PesetaCoinPTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0909PesetaCoinPTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0635PesetaCoinPTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.225PesetaCoinPTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0377PesetaCoinPTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0135PesetaCoinPTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.014PesetaCoinPTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.227PesetaCoinPTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0785PesetaCoinPTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.054PesetaCoinPTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.759PesetaCoinPTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.71PesetaCoinPTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0139PesetaCoinPTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0152PesetaCoinPTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.315PesetaCoinPTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0704PesetaCoinPTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.07PesetaCoinPTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11.99PesetaCoinPTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.84PesetaCoinPTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.742PesetaCoinPTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.281
PesetaCoinPTC သို့ BitcoinBTC0.0000009 PesetaCoinPTC သို့ EthereumETH0.00003 PesetaCoinPTC သို့ LitecoinLTC0.000171 PesetaCoinPTC သို့ DigitalCashDASH0.000101 PesetaCoinPTC သို့ MoneroXMR0.000107 PesetaCoinPTC သို့ NxtNXT0.723 PesetaCoinPTC သို့ Ethereum ClassicETC0.00143 PesetaCoinPTC သို့ DogecoinDOGE2.85 PesetaCoinPTC သို့ ZCashZEC0.000106 PesetaCoinPTC သို့ BitsharesBTS0.391 PesetaCoinPTC သို့ DigiByteDGB0.369 PesetaCoinPTC သို့ RippleXRP0.0335 PesetaCoinPTC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000342 PesetaCoinPTC သို့ PeerCoinPPC0.0359 PesetaCoinPTC သို့ CraigsCoinCRAIG4.53 PesetaCoinPTC သို့ BitstakeXBS0.424 PesetaCoinPTC သို့ PayCoinXPY0.173 PesetaCoinPTC သို့ ProsperCoinPRC1.25 PesetaCoinPTC သို့ YbCoinYBC0.000005 PesetaCoinPTC သို့ DarkKushDANK3.19 PesetaCoinPTC သို့ GiveCoinGIVE21.5 PesetaCoinPTC သို့ KoboCoinKOBO2.23 PesetaCoinPTC သို့ DarkTokenDT0.00933 PesetaCoinPTC သို့ CETUS CoinCETI28.67